Ụbọchị mba na alaeze Saudi Arabia ọhụrụ ga na -enwu gbaa na World of Tourism
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Ụbọchị mba na alaeze Saudi Arabia ọhụrụ ga na -enwu gbaa na World of Tourism
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
Onye isi ya, onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Saudi Arabia, Maazị Ahmed Aqeel AlKhateeb, abụghị naanị soro HE Edmund Bartlett, Minista njem nlegharị anya Jamaica. Ọ na -agba egwu ịgba egwu nke ndị njem.
Ụwa na -ele anya na Riyadh maka enyemaka, enyemaka na -agakwa.
Saudi Arabia na -agbago elu n'oge ọrịa a n'ọtụtụ ụzọ.
Ụbọchị mba nke taa nwere ike bụrụkwa ụbọchị nlegharị anya mba maka Saudi Arabia ebe ụwa na -ekiri.
A na -eme emume ụbọchị Saudi Arabia kwa ụbọchị Septemba 23rd.
A maara na mpaghara ya dị ka Al-Yaom-ul-Watany, ọ na-akara Septemba 23rd 1932, mgbe Eze Abdulaziz kwupụtara njikọta nke obodo ahụ dị ka alaeze.
Ọchịchị Saudi E hiwere Arabia n'afọ 1932 nke Eze Abdulaziz (nke a maara dị ka Ibn Saud na West).
Mgbe a jụrụ onye ọ bụla ụbọchị ndị a banyere Saudi Arabia, echiche maka njem na njem nlegharị anya na echiche mmanụ na akụ.
Nke a dị nnọọ iche na mbụ mgbe alaeze ahụ mepere naanị maka njem njem okpukpe ma ọ bụ azụmahịa.
Site na "enweghị njem", Saudi Arabia gbanwere "ihe niile gbasara njem" taa.
Ọ bụghị naanị na Saudi Arabia ghọrọ onye ọkpụkpọ mpaghara kacha mkpa na mpaghara njem mana ọ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime ndị egwuregwu ụwa kachasị mkpa.
Ijikwa ụlọ ọrụ mpaghara dị ka UNWTO, WTTC, obodo a na -etinye ọtụtụ ijeri dollar ka ọ bụghị naanị napụta mpaghara nke ya kamakwa n'inyere ụwa aka.
Ndị otu mmasị Saudi site na Network Njem Nleta Ụwa n'okpuru nduzi nke HRH Dr Abdulaziz Bin Naser Al Saud na Raed Habbis nwere ndị otu mkparịta ụka WhatsApp kacha arụ ọrụ ugbu a na WTN.
Saudi Arabia na -atụ anya ịbụ ebe obibi maka World Tourism Organisation (UNWTO). Inwe isi ụlọ ọrụ UNWTO n'ime alaeze ahụ ga -egosipụta ọkwa zuru ụwa ọnụ dịka onye ndu njem nlegharị anya ụwa maka Saudi Arabia.
Mgbe a Onye isi ala Saudi na Prime Minista Spain Kwuo na ọ nwere ike dị mkpa maka azụmahịa UNWTO ịkwụsị oke ọchịchọ dị otú ahụ site na Alaeze. UNWTO bụ isi na Spain, na -enye alaeze Spain ọnọdụ zuru ụwa ọnụ na njem, yana oche na -adịgide adịgide na Kọmitii Executive UNWTO.
Ọ dị ka mkparịta ụka gbasara ịzere ịkwaga Saudi Arabia inye UNWTO ụlọ ọhụrụ na -aga n'ihu ugbu a.
Europe, America, ma ọ bụ China na -atụ ụjọ na Saudi Arabia na -agbago ebe ha na -adakarị, mana ọ na -emepụta olileanya n'Africa, Eshia, ọbụlagodi na Caribbean na mpaghara ndị ọzọ.
Onye minista njem nlegharị anya nke Jamaica Edmund Bartlett nwere obi ụtọ na Saudi Arabia, nke ahụ Onye isi ya bụ Ahmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia hụrụ ka ya na Edmund Bartlett, onye minista njem nlegharị anya Jamaica na -agba egwu n'ala Bob Marley.
Onye isi ya bụ Ahmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia na -agba egwu na Edmund Bartlett, Minista njem nlegharị anya Jamaica
Ọnọdụ ụwa nke njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na -agbanwe n'ụzọ doro anya, ọ nwere ike gbanwee nke ọma na Saudi Arabia.
Ọ nweghị mba ọzọ n'ụwa gosipụtara ụdịrị echiche ụwa a maka ngalaba a n'oge gara aga. Enwere ihe karịrị ọhụụ, enwere ego, ọtụtụ ego.
Mgbe Saudi Arabia pụtara na nzukọ, na mkparịta ụka, ọ na -abụ isi ihe nzukọ ma ọ bụ mkparịta ụka.
Na nnọkọ WTTC na Cancun na Mee ngosipụta nke onye ozi Saudi mere ka WTTC CEO Gloria Guevara kwụsị ọrụ ya na WTTC. Ugbu a ọ bụ onye ndụmọdụ kacha elu maka minista AlKhateeb, bi na Riyadh, ma na -eme ememme National Saudi taa dịka nwa amaala Mexico.
Ọ dị ka ya na onyonyo nke obodo mepere emepe dị njikere ịmalite ọdịnihu ọhụrụ na -enwu gbaa mgbe ọ na -abịa imebi ihe onyonyo ya n'ahịa ụwa.
Taa, Alaeze na -eme ememme ezumike nke mba ya - na n'ezie nke a bụkwa ezumike nke nwere nnukwu njem na njem njem ebe niile.
Saudi Arabia jikọtara mpaghara anọ ahụ ka ha bụrụ otu steeti site na mmeri dị iche iche malite na 1902 na njide nke Riyadh, ụlọ nna nna ya, ụlọ Saud.
Kwa afọ, Septemba 23 bụ ohere maka ụmụ amaala Saudi na -eme ememme ọdịnala ha ma na -ele anya ọdịnihu. N'oge mmemme ụbọchị mba, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha jupụtara n'okporo ụzọ dị na mba ahụ niile - agba nke ọkọlọtọ Saudi na -egosi na ihe osise Doodle. Enwere ike ịhụ ụmụ amaala na agba atụ ndị a ma gosipụta ọkọlọtọ mba n'ụgbọ ala na n'ụlọ ndị mmadụ.
Ebe obibi nke Alakụba ma ugbu a na -enwe mgbanwe mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba, alaeze Saudi Arabia na -eme ncheta ọmụmụ ya nke 91 September 23. Nkọwa okwu maka ụbọchị Saudi nke afọ a bụ “Ebe obibi nye anyị”.
A na -eme emume ncheta ụbọchị Saudi egwu egwu, egwu, na mmemme omenala. A na -eji ọkọlọtọ Saudi chọọ okporo ụzọ na ụlọ mma, ndị mmadụ na -eyiri agba nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọcha, wee gosipụta balloons n'otu.
Saudi Arabia, na eze Saudi Arabia, bụ obodo dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Eshia. Ọ gbasara akụkụ ka ukwuu nke Peninsula Arabian, yana mpaghara ala dịka 2,150,000 km². Saudi Arabia bụ mba kachasị na Middle East, yana mba nke abụọ kachasị na mba Arab.
A na -ahụta njem nlegharị anya dịka ọhụụ ọgbara ọhụrụ maka uto ọhụrụ.
Ministri njem nlegharị anya mara ọkwa na alaeze ahụ emegheere ndị njem ala ọzọ ụzọ na iwepu nkwụsị nke ntinye maka ndị na -eji visa njem nleta malite na Ọgọst 1, 2021.
Alaeze ahụ na -etinye ego na njem nlegharị anya nke ukwuu. Onye na -ahụ maka njem nlegharị anya bụ onye ozi nwere ezi echiche zuru ụwa ọnụ, Mazị Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Ọ bụ Minista njem nlegharị anya maka Saudi Arabia. O nwere ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe na itinye ego na ọrụ ego, n'oge nke o guzobere, jikwaa ma rụzigharịa ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ. A maara ya maka ikike o nwere iduzi mgbanwe ụlọ ọrụ wee nweta ọhụụ n'ọdịnihu nke ọma na n'ụzọ dị irè.
Ugbu a, ọ na -ejide ọnọdụ ndị ahụ
Onye isi oche nke Board of Directors of Saudi Tourism Authority.
Onye isi oche nke ndị isi oche nke Fund Development Tourism.
Onye isi oche nke Kọmitii Mmemme Ndụ Ndụ
Onye isi oche nke ndị isi oche maka Saudi Fund for Development
Onye isi oche nke ndị isi oche nke ụlọ ọrụ ndị agha Saudi Arabia (SAMI).
Onye odeakwụkwọ ukwu na onye otu ndị isi oche ma ọ bụ ikike mmepe Development Gate
Onye odeakwụkwọ ukwu na osote onye isi oche nke Board of Directors of New Jeddah Downtown
Onye otu ndị isi oche nke Fund Investment Public.
Onye otu ndị isi oche nke nzukọ niile maka ụlọ ọrụ ndị agha.
Onye otu Council of Economic and Development Affairs.
Onye otu ndị isi oche nke ụlọ ọrụ Neom.
Onye otu Board of Directors of the Red Sea Development Company.
Onye otu ndị isi oche nke National Development Fund.
Itinye ego na mpaghara njem bụ otu n'ime ogidi nke Saudi Vision 2030 na ihe akaebe maka nnọgidesi ike ịga n'ihu iji mezuo ebumnuche na ebumnuche ya:
Itinye ego na mpaghara a na -enye aka n'ịmepụta ohere itinye ego na -aba uru maka ndị na -etinye ego n'ime obodo na ndị mba ọzọ.
Anyị anaghị ewere njem nlegharị anya dị ka ọkwọ ụgbọ ala maka uto akụ na ụba, kamakwa dị ka àkwà mmiri maka nkwukọrịta ọdịbendị na ụwa, nke nwere ike ịkwalite ọkwa nghọta na nkwanye ugwu ọnụ.
Njem nleta bụ otu n'ime ngalaba na -eto n'ike n'ike n'ụwa. N'ime afọ asatọ gara aga, ngalaba njem na -agbasawanye na nkezi karịa nkezi ụwa.
Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị World Travel and Tourism Council si kwuo, ngalaba a na -atụnye ụtụ n'ihe ruru pasenti iri nke nnukwu ngwaahịa ụlọ (GDP) zuru ụwa ọnụ.
N'afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ ndị njem na -eto eto ruru pasent 3.9, ebe akụ na ụba ụwa nwetara pasent 3.2.
A na -atụ anya na mpaghara njem ga -eto site na 3.7 pasent ka ọ na -erule 2029, nke ga -atụnye ụtụ n'ihe karịrị ijeri $ 13 na akụnụba ụwa nke nha 11.5 pasent nke GDP zuru ụwa ọnụ.
Ngalaba njem nlegharị anya na -akwado ọrụ nde 319 n'ụwa niile - nke dị ihe dị ka otu n'ime ọrụ iri ọ bụla gburugburu ụwa - yana ọ bụ ya kpatara imepụta otu ọrụ site na ọrụ ise ọ bụla nke enyere n'ime afọ ise gara aga.
N'ọkwa mba ụwa, a na -ahụta mpaghara njem nlegharị anya ka ọ bụrụ nke zuru oke site na ntinye oke nke ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị ma e jiri ya tụnyere mkpokọta ndị ọrụ.
A na -aga n'ihu n'ịzụlite akụrụngwa na ọrụ bụ isi na alaeze ahụ na ebumnuche nke imeju agụụ na -abawanye n'ụzọ kwekọrọ na atụmatụ njem na alaeze:
- A ga -ewu mkpokọta ụlọ nkwari akụ 150,000 n'ime afọ atọ na -abịanụ. Pasent 70 nke ụlọ nkwari akụ ndị a ka ụlọ ọrụ nkeonwe ga -eme.
- Alaeze ahụ, na nkwado nke ndị na -etinye ego n'ime obodo na ndị mba ofesi na ego itinye ego mpaghara, gụnyere Fund Development Tourist, na -achọ iguzobe ụlọ nkwari akụ 500,000 n'ofe Alaeze ahụ ka ọ na -erule 2030.
- Edebanyela ọtụtụ ihe ncheta nke ọnụ ahịa ya ruru ijeri iri ise na ise nke Saudi iji melite akụrụngwa na ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụlọ nkwari akụ dị.
- Alaeze ahụ na -achọ ịbawanye ikike nnabata nke ọdụ ụgbọ elu nke Alaeze site na ihe karịrị nde mmadụ 100 kwa afọ.
Ihe ndị dị ugbu a na -eche Saudi Arabia ihu:
Ndakpọ akụ na ụba nke ọrịa na -efe efe kpatara nke ukwuu na mpaghara ndị njem, ọkachasị ngalaba ụgbọ elu na ụlọ nkwari akụ.
Ọdịda nke ndị njem site na nde 26.
Enwere ọrụ 200,000 metụtara mpaghara a.
Alaeze ahụ ewepụtala atụmatụ iji kwado akụ na ụba na ijeri Riyal ijeri iri abụọ na abụọ nke Saudi.
Ndị Saudis na mpaghara a eritela uru na atụmatụ a iji kwado ụgwọ ọnwa nke gọọmentị.
Alaeze ahụ ewepụtala ụzọ iji kwado ụgwọ ọnwa ndị Saudis na ngalaba nkeonwe nwere ọnụ ahịa ijeri riyal nke Saudi Arabia 9. Nkwado a gbadokwara mpaghara ndị njem.
Enyerela ohere site na mmemme Ajeer ịgbanwere uru n'etiti akụrụngwa iji belata mmebi.
Akwụsịla ụgwọ ndị metụtara njem na obodo.
Ụlọ oriri na ọ haveụ haveụ anabatala ihe karịrị ụmụ amaala 50,000 ndị laghachiri n'Alaeze site na ntinye "nloghachi nke nwa amaala", ebe a nabatara ha n'ime ụlọ nkwari akụ karịa 13,000 maka oge na -agbatị n'etiti otu izu abụọ.
Na ebumnuche ịkwalite njem nlegharị anya obodo, Alaeze amalitela Oge Oge Ọchịchị Saudi nke na -ekpuchi ebe nlegharị anya iri na mba niile.
Atụmatụ Njem Nleta n'Alaeze
Alaeze ahụ akwadola atụmatụ mba maka njem nlegharị anya, nke gosipụtara isi ahịrị maka ebumnuche nke mpaghara nke kwekọrọ na ebumnuche Saudi Arabia:
Ebumnuche anyị bụ iwelie ntinye aka na ngalaba njem nlegharị anya na GDP site na ọnụego ugbu a dị pasent 3 ruo ihe karịrị pasenti iri site n'afọ 10.
Ngalaba njem na -ezube imepụta nde ọrụ ọzọ iji rute ọrụ nde 1.6 na mpaghara njem nlegharị anya site n'afọ 2030.
Anyị na -elekwasị anya na -adọta 100 nde nleta obodo na mba ụwa kwa afọ site na 2030.
Visa ndị njem
Alaeze ahụ bidoro visa ndị njem na Septemba 2019, ebe ụmụ amaala mba 49 nwere ike nweta visa na elektrọnik, ebe ndị nwere visa US, UK na Schengen nwere ike nweta visa mgbe ha bịarutere, ndị isiokwu nke mba ndị ọzọ nwere ike itinye akwụkwọ iji nweta visa site na nleta. ndị nnọchianya nke Alaeze na mba ha.
Mba 49 dị ihe dị ka pasenti 80 nke mmefu ndị njem nlegharị anya n'ụwa niile ma nabata ihe ruru pasentị iri asaa na ise nke ndị na -achọ njem njem okomoko n'ụwa.
Njem Nleta Ndị Njem Nleta
• Kedụ ihe mgbaru ọsọ dị iche iche ịtọlite ​​Fundment Investment Fund?
- Itobe ego ntinye ego ndị njem nlegharị anya bu n'obi ịkwalite itinye ego ndị njem nleta na alaeze ahụ, ịba ụba ego ha na -enweta, ịbawanye onyinye nke ngalaba njem na GDP, na imepụta ọtụtụ ọrụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Saudi na mpaghara njem, yana inye aka n'ị nabata ọtụtụ ndị njem na alaeze dịka ebumnuche nke atụmatụ mba maka njem na Saudi Vision 2030.
• Kedụ ngwa ọrụ nke ego ahụ ga -eji kwado ego na ịdọta itinye ego ndị njem?- E hiwere Fund Investment Fund na isi obodo ijeri iri na ise nke Saudi riyal. Ego ahụ abanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na ụlọ akụ mpaghara iji kwado ọrụ ndị njem na ọ dịkarịa ala ijeri Riyal Saudi 15.
Ego a, na mmekorita ya na ụlọ akụ itinye ego, ewepụtala ego itinye ego na ngalaba njem dị iche iche.
• Kedụ ohere itinye ego nke ego a na -enye?
- Otu ebumnobi kachasị mkpa nke ego ahụ bụ ịkwado na ịgba ume itinye ego na njem nlegharị anya na ala eze.
N'echiche a, ego ahụ na -emepe akụkụ imekọ ihe ọnụ na ndị na -etinye ego ozugbo site n'inye ha nkwado n'ihe ọ bụla metụtara ọrụ ndị njem nke nwere ike ibute mmepe ngalaba njem na mpaghara dị iche iche nke Alaeze ahụ, gụnyere mpaghara dị iche iche, dị ka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na imepe ihe. ebe ndị njem, ile ọbịa n'ozuzu ya na ndị nhazi njem.
Ego a na -achọkwa ime ka ọnọdụ itinye ego bụrụ ihe mara mma maka ụlọ ọrụ nkeonwe yana inye nkwado ya iji nweta atụmatụ bara uru karịa, nke na -emepụta ohere itinye ego buru ibu na Alaeze ahụ site na imezigharị ebe ndị njem na -eme dịka atụmatụ mba si dị maka njem.
Ọzọkwa, ego ndị ahụ na -arụ ọrụ dị mkpa n'ịzụlite ụlọ ọrụ nlegharị anya n'ozuzu ya na ịkpali ihe ndị ọzọ
Ndị nwoke Saudi na ụmụ nwanyị Saudi ga -etinye aka na ngalaba a na ebumnuche nke inye otu nde ọrụ ọhụrụ site na 2030, na mgbakwunye ịbawanye onyinye nke ngalaba njem na Kingdom ruo pasent 10 site na 2030 site na ọnụego ugbu a nke 3 pasent, na na -eme atụmatụ ịnata nleta nlegharị anya nde 100.
• Gịnị bụ ụzọ nkwụnye ego nke ego ahụ nyere?
- Ego a na -akwado ụlọ ọrụ nkeonwe site na ịnye ego mgbazinye ego, yana itinye ego na ọrụ site na inwe oke na atụmatụ ndị a. Ego a na -enyekwa nkwa maka ọrụ ụfọdụ.
- A na -enyekwa nkwado n'ọnọdụ ụfọdụ maka ọrụ pụrụ iche na ndị ọsụ ụzọ site na ịnye usoro niile ekwuru na mbụ. Ego a, site n'ịjikọ aka na ụlọ ọrụ gọọmentị dị mkpa, na -enye aka n'inye ala maka ọrụ ụfọdụ dị mkpa ma dị mkpa.
Weebụsaịtị Fund Development Tourism